Mpempe akwụkwọ foto maka ụlọ ụmụaka
Ụlọ ụmụaka bụ obere nwa nke nwa gị, nke ọ na-etolite, na-etolite wee ghọọ onye. Ya mere, mgbe ị na-emepụta ụlọ nke ime ụlọ ya, ị ga-ebu ụzọ cheta ihe nzuzu nke nwa ahụ, nke abụọ - banyere ụdị ihe eji eme ihe n'oge a.
Ihe ntanetiri - nke a bụ kpọmkwem mmewere nke imewe, nke ị nwere ike ịmepụta ọnọdụ dị mma maka nwa ahụ n'ime ụlọ ya. O yikarịrị ka nwatakịrị ahụ ga-achọ ịhụ na mgbidi dị n'ime ụlọ ya dịka ndị odide si akụkọ ifo na eserese. Mana o siri ike ịchọta ụlọ akwụkwọ ahụ dị otú ahụ. Ebe a, enyemaka nwere ike ịbịa na akwụkwọ ahụ aja. Ụlọ nwatakịrị ahụ ga-aghọkwa obodo na-egbukepụ egbuke egbuke na nke mara mma, ebe ndị dike a hụrụ n'anya na-adị ndụ.
A na-etinye akwụkwọ ahụaja dị otú ahụ na mpaghara ebe ụmụaka na-egwuri egwu, ọ bụghị na ebe nwata ahụ ga-etinye aka na ya. Ebe ọ bụ na ị na-ele foto na-egbukepụ egbukepụ, nwata ahụ, ma nwata nke ọ ka na-eto eto, ga-adọpụ uche ya site n'ịmụ ihe.
Mpempe akwụkwọ foto n'ime ime ụlọ akwụkwọ
Ụfọdụ kwenyere na ụmụaka site na nwa ruo afọ atọ ekwesịghị ijide akwụkwọ mgbidi na mgbidi, ọ ka mma inye ohere ịchọta ụda pastel. E nwere echiche ọzọ: ime mgbidi na-egbuke egbuke na ntaneti na agba ndị a ga-eme ka ụlọ ahụ dịghachi ndụ.
Ụmụaka ndị dị afọ 6-7 nwere ike ịchọta akwụkwọ ahụaja maka ụlọ ụmụaka. N'ọgbọ a, ụmụaka na-ejikarị ịnyịnya ibu, anụ mara mma, ụmụ nwa atụrụ. Ihe kachasị mkpa bụ na ụmụ anụmanụ ndị dị na akwụkwọ ahụaja adịghị njọ na egwu. Mgbe nwatakịrị ahụ tolitere, ndị na-ese foto na akụkọ ntụrụndụ adịghị amasị ya, ma anụmanụ ndị dị adị bụ ihe ọzọ.
N'ụlọ ụlọ ụmụaka maka ụmụ agbọghọ ka akwụkwọ atụ dị mma, dịka ọmụmaatụ, na okooko osisi. N'ụlọ dị otú ahụ, nwa agbọghọ ga-enwe ahụ iru ala, dị mma na ọbụna onye toro eto. Igwe mara mma ga-akụziri nwa agbọghọ ahụ n'amaghị ama ka ọ dị ọcha na n'usoro. Obi ụtọ Rapunzel, Little Mermaid na Snow White ga-esi na nwata malite ịkụ nwa gị n'anya nke ịma mma. Ma nwa eze nke ụlọ ezumezu ụlọ akwụkwọ na foto foto ụmụaka ga-abụ enyi kacha mma nke nwa agbọghọ gị,
N'ime ime ụlọ akwụkwọ ahụ ụmụaka na ọdịdị nke ihe odide nke Wheelbarrows nke Disney karịsịa ga-amasị ụmụ nwoke ahụ. Dị nnọọ ka ndị na-agbanwe agbanwe, na ndị na-eme ihe nkiri, ndị dị otú ahụ ga-emepụta ikuku pụrụ iche n'ime ụlọ nke nwa nwoke n'ọdịnihu. Ọtụtụ ụmụ nwoke na-atụ nrọ ịghọ ndị ụsụụ mmiri, ọ bụrụ na ị na-etinye akwụkwọ ahụaja n'ime ụlọ gị n'ụgbọ mmiri, nwa gị ga-enwe obi ụtọ dị ukwuu banyere ya.
Ma ụmụ agbọghọ ma ụmụ nwoke agaghị enwe mmasị na mgbidi kpuchiri ebe ụmụ akwụkwọ na-ese foto nke nwoke nwere mmasị nwoke Masha na Bear, ndị dike nke Madagascar, ndị Ọchịchị si Ice Age, Eze Lion na Panda Kung Fu, nwa Deer Bambi na ọtụtụ ndị ọzọ.
Iji zụlite ikike okike nke nwatakịrị gị, kpoo na agbaaka akwụkwọ osise, nke nwatakịrị ga-amụta ise.
Ikekwe umuaka gi ga-enwe obi uto n'ile ihe omimi nke umuntakiri nke umuntakiri nke 3D, nke gosiputara umuaka ndi ozo, umu anu osisi ma obu okooko osisi mara mma dika o kwere mee.
Atụmatụ maka ị na-ahọrọ eserese foto na ụlọ akwụkwọ
Na-ahọrọ akwụkwọ ahụaja maka ụlọ ụmụaka, echefula na ị pụghị ikpuchi mgbidi nile ha, otu ga-ezuru ka ị ghara ime ka obi dị gị mma. N'elu akwụkwọ ahụaja dị mma, ọ ka mma ịghara itinye ebe nchekwa, ọkpa ma ọ bụ okooko osisi. Ọ bụrụ na nwatakịrị emeelarị ka ị chọọ ime ụlọ gị, anaghị ahọrọ onwe gị: ha nwere ike ị gaghị achọ nwa ahụ. Mgbe ị na-ahọrọ eserese foto na ụlọ akwụkwọ, a ghaghị iburu ọdịdị nwa ahụ n'uche. Dịka ọmụmaatụ, enweghi ike ịme ụlọ nke nwa ewu na-eme ka ahụ dị mma ma ọ bụ ihe egwu. Ụmụ anyị na-etowanye ngwa ngwa, na, ma eleghị anya, n'oge na-adịghị anya, ha ga-achọ ịgbanwe mgbidi foto nke ụmụaka maka mgbakwunye ndị okenye.
Kedu esi esi wụnye bath batrị?
Silicone plasta maka facade
Kedu ka esi eme ngere nke osisi a?
Eji aka aka na-abanye
Ntu akwa ụlọ
Iguzobe ntọala ụlọ - nke ihe dị mma?
Ebe a na-esite n'ọdụ ụgbọ mmiri
Ime ụlọ nke obere ulo
Utu ime osisi
Igwe maka kichin n'ala
Ime ụlọ ime ụlọ jikọtara na kichin
Ịme mkpuchi maka bat
Oké osimiri-buckthorn jam - bara uru Njirimara na contraindications
Kylie Jenner gụrụ aha nwa ọhụrụ ahụ
Anya na-adaba Kromogeksal
Onye na-egbuke egbuke nke Kim Kardashian: nkọwa dị oke egwu, ịlaghachi n'ụlọ, egwu nke ịbụ onye a dinara n'ike na ebubo megide ụda TV
Ònye ga-enwe òkè Kate Middleton na ihe nkiri akụkọ ihe mere eme?
Ihe nkedo akwa maka brik
Gịnị kpatara nrọ nchara nchara nchara?
Cystitis na-enye nwa ara
Onye na-eri anụ anaghị eri anụ
Jennifer Lopez n'oge ọ bụ nwata
Foto nke nwa agbọghọ nwere okooko osisi
Ihe ịrịba ama - bit apu
Salad akwukwo - ihe oma na ihe ojo
Shakira, ya na nwa ya nwoke dị ọnwa 8, kere òkè n'omume ọha na eze
Uwe elu-anyanwụ - ụdị kachasị mma maka oge ọ bụla
Gum na ngwa nri n'ụlọ akwụkwọ
Kedu esi esi nri beets n'ime ngwugwu na oven microwave?
Kedu ka esi ehichasị bronchi?
Igwefoto ọkachamara - ụdị kachasị mma maka ịgba égbè
Umbilical ụdọ na izu iri atọ na atọ gestation